Ny fonon-tanana Men fanaovana kajy habe amin'ny aterineto
Ny fonon-tanana Men fanaovana kajy habe amin'ny aterineto dia mamela anao hahita sy hampiova finoana ny fonon-tanana Mens habe amin'ny iraisam-pirenena sy ny tanana circumference habe amin'ny santimetatra na santimetatra.
Men ny fonon-tanana habe fanaovana kajy an-tserasera mamela anao hahita sy ny olona hiova finoana ny fonon-tanana habe amin'ny iraisam-pirenena sy ny tanana circumference habe amin'ny santimetatra na santimetatra. Ohatra, fonon-tanana niova fo ho an'ny olona avy amin'ny habeny iraisam-pirenena ny tanana circumference amin'ny santimetatra ny santimetatra, na avy amin'ny tanana circumference ny iraisam-pirenena. Koa ianao dia afaka mahita ny fonon-tanana ny olona habeny tabilao, amin'ny lehibe sy ny kely habeny.
Fonon-tanana ho an'ny lehilahy
Misy lehibe sy kely ny fonon-tanana ny olona habe tabilao ao amin'ny firenena samy hafa.